မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ... - Online Hartha
မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ…
စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဝါစတုသျှတ္တရပညာအရ စကြာဝဠာထဲမှာ အလို အလျောက် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
အရာတွေရော လူသားတွေ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ မည်သည့်အရာမဆို အကုန်လုံးမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့
စွမ်းအင် ရှိနေကြတယ်ဆိုတာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်တွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေ များလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရသလို လာဘ်ပိတ်တာတွေ။ ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေ ဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် ငွေကြေး အဆက်မပြတ်ဝင်သလို၊ ကျန်းမာ ချမ်းသာကာ၊ ငွေကုန်ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘေလ်၊ ပြေစာဟောင်းများ၊ receipt ဟောင်းများ
ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီး သူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်းရက်စက်သော ပုံများ။(မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။)
လီမိုလီ မှတ်စုများ၊ လိပ်စာကဒ် အဟောင်းများ၊
သက်တမ်းကုန်နေတဲ့- membership card များ
သုံးမရအောင် စုတ်ပြတ်နေတဲ့ ငွေစက္ကူများ
ခေါက်တွန့် နေတဲ့ ငွေစက္ကူများ (ခေါက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံကို ဖြန့်ထည့်ပါ။)
သွားရည်စာမုန့်တွေနဲ့ ဆေးများ။ (ဆေးများဟာ- ကျန်းမာရေး ပြသနာကို ထပ်ခေါ်ပေးနေလို့ ခွဲဆောင်ပါ။)
လက်သည်းညှပ်နဲ့ ကပ်ကြေး အပါအဝင် ချွန်ထက်တဲ့ အရာများ။
ကျွမ်းကျင်သော နက္ခတ်ပညာရှင်အဆင့် ဆရာ၏ အကြံပေးခြင်း မဟုတ်သော အဆောင်များ၊
ပရိတ်ချည်၊ လက်ဖွဲ့ စသည်များ (သီးသန့်ထားပါ။)
သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်) ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကတော့ .
ငွေ၊ ကြေး ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော နိမိတ်ကောင်း အရာများ။
လက်ချမီး မယ်တော်ပုံ- ရုပ်ပုံတော်ဖြစ်စေ ကြေးဒင်္ဂါး ဖြစ်စေ.
ဗောဓိညောင်ရွက် (အထူးသဖြင့် နှလုံးရောဂါ ရှိသူများအတွက်)
ပင်လယ်ခရုခွံများ (စကြာဝဠာစွမ်းအင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။)
ဆန်စေ့ ၂၁စေ့ (အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။)
ဂျင်းဖက်လေးအနည်းငယ် (ငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်စေသည်) ကို ထည့်ထားခြင်းဖြင့် ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ အကျိုးစီးပွား လာဘ်လာဘတိုးတက်ကြစေ။
လာဘျတိတျစသေဖွငျ့ သငျ့ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ဒါတှမေထားပါနဲ့
စှမျးအငျတှအေကွောငျးကို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ ဝါစတုသြှတ်တရပညာအရ စကွာဝဠာထဲမှာ အလို အလြောကျ သဘာဝအတိုငျး ဖွဈပျေါလာတဲ့ အရာတှရေော လူသားတှေ ဖနျတီးပွုလုပျထားတဲ့ မညျသညျ့အရာမဆို အကုနျလုံးမှာ တဈခုထကျပိုတဲ့ စှမျးအငျ ရှိနကွေတယျဆိုတာ လလေ့ာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှ မိမိအသုံးပွုနတေဲ့ ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ မလိုအပျတဲ့ အရာတှေ ထညျ့ထားမိတဲ့အခါ မကောငျးတဲ့ စှမျးအငျတှေ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
ငှကေုနျကွေးကြ၊ ငှယေိုပေါကျတှေ မြားလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုကျမှုတှေ ကွုံရသလို လာဘျပိတျတာတှေ။ ငှကွေေး အလိမျခံရတာတှေ ဖွဈတတျပွီး ကောငျးသောစှမျးအငျတှေ ဖွဈစတေတျသညျ့အရာတှကေို သငျ့ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ ထညျ့ထားခဲ့မညျဆိုလြှငျ ငှကွေေး အဆကျမပွတျဝငျသလို၊ ကနျြးမာ ခမျြးသာကာ၊ ငှကေုနျရတဲ့ ငှထှေကျပေါကျတှေ ပိတျပဈလိုကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဘလျေ၊ ပွစောဟောငျးမြား၊ receipt ဟောငျးမြား
ညဈညမျးပုံမြား၊ သဆေုံးပွီး သူမြားပုံ၊ ကွမျးတမျးရကျစကျသော ပုံမြား။(မကောငျးတဲ့ စှမျးအငျမြား ဖွဈစပေါတယျ။)
လီမိုလီ မှတျစုမြား၊ လိပျစာကဒျ အဟောငျးမြား၊
သကျတမျးကုနျနတေဲ့- membership card မြား
သုံးမရအောငျ စုတျပွတျနတေဲ့ ငှစေက်ကူမြား
ခေါကျတှနျ့ နတေဲ့ ငှစေက်ကူမြား (ခေါကျနတေဲ့ ပိုကျဆံကို ဖွနျ့ထညျ့ပါ။)
သှားရညျစာမုနျ့တှနေဲ့ ဆေးမြား။ (ဆေးမြားဟာ- ကနျြးမာရေး ပွသနာကို ထပျချေါပေးနလေို့ ခှဲဆောငျပါ။)
လကျသညျးညှပျနဲ့ ကပျကွေး အပါအဝငျ ခြှနျထကျတဲ့ အရာမြား။
ကြှမျးကငျြသော နက်ခတျပညာရှငျအဆငျ့ ဆရာ၏ အကွံပေးခွငျး မဟုတျသော အဆောငျမြား၊
ပရိတျခညျြ၊ လကျဖှဲ့ စသညျမြား (သီးသနျ့ထားပါ။)
သငျ့ပိုကျဆံအိတျ(သို့မဟုတျ) ငှသေတ်ေတာထဲမှာ ထညျ့ထားသငျ့တဲ့အရာတှကေတော့ .
ငှေ၊ ကွေး ဖွငျ့ ပွုလုပျထားသော နိမိတျကောငျး အရာမြား။
လကျခမြီး မယျတျောပုံ- ရုပျပုံတျောဖွဈစေ ကွေးဒင်ျဂါး ဖွဈစေ.
ဗောဓိညောငျရှကျ (အထူးသဖွငျ့ နှလုံးရောဂါ ရှိသူမြားအတှကျ)
ပငျလယျခရုခှံမြား (စကွာဝဠာစှမျးအငျကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။)
ဆနျစေ့ ၂၁စေ့ (အငျမတနျ အကြိုးမြားပါတယျ။ နောကျပိုငျး ရှငျးပွပေးပါ့မယျ။)
ဂငျြးဖကျလေးအနညျးငယျ (ငှကေိုဆှဲဆောငျနိုငျစသေညျ) ကို ထညျ့ထားခွငျးဖွငျ့ ကောငျးသောစှမျးအငျတှကေို ဖွဈပျေါစကော အကြိုးစီးပှား လာဘျလာဘတိုးတကျကွစေ
၃နာရီမှ ထမင်းစားရတာဆိုတဲ့ case-4 သိစေရန် ရေးတဲ့စာ မန္တလေးသားတွေစေတနာမမွဲဘူး…